पाँचपोखरी यात्रा ‘एक स्मरण’ | Citizen Post News
पाँचपोखरी यात्रा ‘एक स्मरण’
२०७४ भदौ २१ गते २१:३४
तिपेनी बजारको महादेव खोेला किनारामा हामी आ–आफ्ना झोला मिलाउंँदै थियौं । अब गाडीको यात्रा यहिँसम्म हो, नजिकै बस्नुभएका दाजु नवराज ढुङ्गानाको आवाज दुबै कानमा ठोक्किएपछि टाउको उठाए, हेरें र मुसुक्क हाँसे हासोँसंगै पैदल हिड्नेमा सर्मथन पनि जनाए । अबको यात्रा भने पैतालाको नै भर थियो । मेलम्ची बजारबाट करिब ४५ मिनेटको गाडीको यात्रा सकेर हामी १६ जनाको टोली भोताङलाई पहिलो दिनको गन्तव्य बनाएर अगाडि बढ्यौं । मेलम्ची बजारबाट १५ जनाको टोली भएपनि खाल्डेखोलामा पुगेर यात्रा भरिकै एउटा रमाईलो पात्र अझै भनौं जीवनको अनन्तकालसम्म नबिर्सने व्यक्ति श्रीवास्तव जो हाम्रो समुहमै समेटिए ।
हिमाली गाँउपालिका पाँचपोखरी थाङ्पालको तिपेनी बजारमा पुग्दा मध्याह्नको १२ बजेको थियो । हाम्रो गन्तव्य थियो–सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै उच्चस्थानमा रहेको पाँचपाखरी थाङ्पाल गाँउपालिकामा अवस्थित पाँचपोखरी कुण्ड । जहाँ पुग्न तिपेनी भोताङ हुंदै करिब १८ घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने जानकारी मिलेको थियो । प्रसिद्ध तिर्थस्थलकोे धार्मिक यात्रामा सहयात्री थियौं ४ जना वयस्क र साथमा १२ जना ४० नकटेका पाका युवा ।
तिपेनी बजारबाट हाम्रो समूह अघि बढ्यो । यात्रासगंै हरियाली जंगलको बिचमा कलकल आवाजयुक्त नदीको किनारालाई हामीले पछ्याई रहेका थियौँ । पाँचपोखरीबाट मेलम्चीको पुछार हुँदै सप्तगण्डकीमा मिसिएको एक भाग ईन्द्रावती नदि उहीँ थियो । बजार नजिकैको पक्कि पुलबाट नदी पार गरेपछि दुई महिलाले पनि पाँचपोखरीको बाटो समेट्दै हामीलाई पछ्याउदै अगाडि बढे । कलकल खोलाको आवाजसहितको हाम्रो समूह ईन्द्रावतीको किनारै किनार अगाडि बढ्यो । हाडिँखोलाको झोलुङ्गे पुल तरेपछि ईन्द्रावतीको किनार छाडेर हामी ठडियौं । केही पहरा भए पनि हरियालीका माझबाट केही उकालो बाटो हुँदै अगाडि बढिरह्यौं । महादेव खोलाको पुनःनिर्माण सम्पन्न नभएकाले हामी तिपेनीबाट सडकको सम्बन्धबसंग बिच्छेद भएका थियौँ । बर्खायाममा खोलाको बहाव बढेकाले यातायात एकतर्फी भएको थियो –तिपेनीबाट पारीका सवारी साधन पारी चल्ने र वारिका वारि चल्ने । अगाडि बढिरहेका हामी थाङ्पाल गाउँको पुच्छार टोलमा खोला तर्न नसकी पारि बसेका गाडी चड्ने आशमा खाजा खादैँ बस्यौं । यहाँसम्म आईपुग्दा दुई महिलाबाट तीन पुगिसकेका थिए ।
केही बेरपछि चार पाङ्ग्रे ट्रक टनाटन एक गाडी मान्छेसहित हाम्रो आगाडि आएर रोक्कियो । हाम्रो १६ जनाको टोली जवरजस्ती त्यहीँ चारपाङ्ग्रेमा कोच्चियौँ । पछिपछि तीन महिलाले पनि गाडीकै सहारा लिन पुगे । ट्रकको हाम्रो यात्रा १० मिनेट पनि टिकेन सडकको अवस्थाका कारण र जोखिमपूर्ण यात्रालाई नपछ्याउने निधोसहित १६ मध्ये छ जना चारपाङ्ग्रेबाट उत्रियौ । पहरा कटे पनि ठाडो उकालो बाटो भने छुट्दो रहेनछ । जंगल र खेतको बीचैबीच ठाउँ–ठाउँमा सिपसार क्षेत्रको समीप हुँदै लामो–लामो सास लिँदै उक्लँदा समुन्द्र सतहसँगको दुरी बढ्दै गएको थियो भने पाँपोखरीको दुरी घट्दै थियो । जनै पूर्णिमाको अवसरमा पाँचपोखरीको मेला लाग्ने भएपनि यो बर्ष भने चन्द्रग्रणको कारण पछाडि सरेको थियो । पछिल्लो तालिकाको मेला लाग्ने समयसंगै हामी उकालो उढ्दै गयांै । कतै बस्यौ, कतै तिर्खा मेटायांै भने कतै मनोरम दृश्यलाई पछाडि पार्र्र्दै क्यामेरामा फोटो कैद गर्र्दै चार घण्टाको उकालो पश्चात मानेखर्कको चौकी पुग्यौं । एक पत्रकारसहित १५ जनाको टोली ईलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीबाट पाँचपोखरीको यात्रा पहिल्याउदै पाँचपोखरी संगको दुरी घटाउदै थियौं । मानेखर्क चौकीमा पुगेपछि पुर्व जानकारी गराएकाले पुग्ने बित्तिकै लेकाली आलु र पिरो अचारले जिब्रो पड्कियो । निकै आडिलो खाजा खाएर बसेको केही समयमा मानेखर्कबाट भोताङसम्म पुग्ने खाली चारपाङग्रे अर्को गाडी समात्यौँ र हामी भोताङतर्फ लाग्यौं ।
भोताङमा पहिलेनै गाडीमा गएको एक टोलीले खाना र बस्ने व्यवस्था मिलाई सकेको रहेछ । खाना खाएपश्चात त्यो रात भोताङको बुद्धको होटलमै कटायौँ ।
भोलीपल्टको विहानै आफ्नो नित्यकर्म सकेर ६ बजे हामी ईन्द्रावती नदीको मुहान पाँचपोखरीलाई भेट्न अगाडि बढ्यौ । हामीलाई पछ्याउने क्रममा तीन महिलाले पनि समूहमा सामेल भए । मेला भर्न ओइरिने तीर्थालुको सेवासँगै व्यापार गर्न जंगलबीचमा खडा गरिएका केही थान अस्थायी पसल उकालो बाटोमा देख्यौं । यी अस्थायी पसलमा पिउनको लागि तातो पानी तथा चिया र स्थानीय उत्पादन आलु (उसिनेको वा पकाएको) पाइने भए तापनि पसल भने प्राय जंक फुडले नै सजिएका पायौं । दुई घण्टाको अनवरत जंगलै–जंगल उकालो बाटोको हिँडाईपश्चात देखियो एउटा पास्तिकको छानो र स्यौलाले बारेको स्थाई पसल र आवश्यक पर्नेलाई बाससहितको व्यवस्था । यहि पसलभित्र सानो स्थलमा एकैछिन सुस्तायौं हामी । केहीबेर अगाडि उकालोमा हिँड्दा निथ्रुक्क भिजेको शरिरमा एकैछिनको विश्रामले पसिना ओभाएर जाडो महसुस हुन थाल्यो । पसलेसहितको पसल त्यहीँ छाडेर हामी अगाडि बढ्यौं ।
उस्तै जंगल, अझ बढी उकालो बाटोले हामीलाई पाइला सार्न झन् कठिन हुँदै थियो । एकाएक आकाशमा बदली भई पानी छिट्याउन थाल्यो । एकैछिनमा थामिएला भन्ने अनुमान गर्दै उकालो चढ्दै थियौं । मसिनो तर निरन्तर पानी वर्षिरह्यो । पानीसँगको अटेरिपना छाडेर आ–आफ्ना झोला खोतलेर रेनकोट र छाता ओढेरै चिप्लो उकालो बाटोमा लेक लाग्नबाट बचाउने अदुवा, ल्वाङ, सुकुमेल र लसुनलाई टोक्दै चुस्दै सुस्तरी अघि बढिरह्यौं । मेलम्ची क्षेत्रको प्रहरी प्रमुख नवराज ढुङ्गानासहित सागर श्रेष्ठ, सुबास ढुङ्गाना, रमेश केसी, श्रीवास्तव र उसको झोला बोक्नको लागि सहयोग गरिदिने एक महिला दिदीसहित हामी सबै पैदल हिडिँरयौं । साँझ पर्नै लागेको थियो, पाँचपोखरी पुगेर आएका बाटो भरी भेटिएका अन्य तीर्थ यात्रीलाई सोध्दै अगाडि बढ्थ्यौँ, उनीहरु सबैको एउटै उत्तर हुन्थ्यो, तपाईंहरूको हिँडाइ उति छिटो छैन, पाँचपोखरी पुग्न त सक्नुहुन्न, आज न्ह्योस्याङ बास गर्नू । रातमा थकाई पनि मर्छ र बिहान झिसमिसेमा हिँड्न अलि सजिलो पनि हुन्छ ।
यो सबै कुरा सुन्दै उकालोमा हाम्रो यात्रा निकै विस्तारै अगाडि बढ्दै थियो । न्ह्योस्याङ नपुग्दै दुई घण्टा वरै करिव १० जनाको टोलीले दुध बिनाको कालोे चिया खाने निधो गर्दै केही बेर आराम गर्यौं । यहीँ चिया पिउने ठाउँमा अर्काे टोलीको तिन जना समेत भेट्यौं । हामीलाई ओभरटेक गरेर जाने अर्को टोलीलाई भने हामीले न्ह्योस्याङ पुगेपछि मात्र फेला पार्यौ । साँझको करिब ६ बजे न्ह्योस्याङ भन्ने स्थलमा पुग्यौं । त्यहाँ रहेको अस्थायी बासस्थल बल्लतल्त ढुङ्गा माटोले अड्याएको गाह्रो प्लास्टिक तथा त्रिपालको छाना लगाएर भुइँमा केही ओछ्याइएको, (जसलाई हामी अङग्रेजीमा म्याट भन्छौ) मा कालो चिया खाएर एक घण्टा जति विश्राम गरियो । सहयात्रीमध्ये दुई जनालाई हिमाली जुकाले पहिल्यै पाठ सिकाउन भ्याइसकेको थियो । जंगलको बिचमा रहेको सानो बस्तीमा पुगेपछि मनले बडो शान्ति र निर्धक्कता महसुस गर्यो भने शरीरको अपेक्षा रह्यो साँझको सन्तुलित भोजन र आरामदायी विश्राम ।
त्यहीँ बस्तीको एउटा घर जसमा हाम्रो दोस्रो रात गुज्रदै थियो । त्यहाँको साहुजीसंगको सामान्य भलाकुसारीपछि सहयोगीका साथमा हामीलाई बेलुकीको भोजन सर्व गरे। भोजनपश्चात केहीबेर त्यहीँ बसेर भोलिको यात्रा, बाटोको अवस्था, बाटो कटाउन सहज गराउने उपायका विषयमा छलफल समेत भयो । केही बेरको छलफल पश्चात सुत्ने तरखरमा लाग्यौं । भोलीपल्ट बिहान तातो चिया पिउदैँ न्ह्योस्यासँग विदा भयौं । केही बेरको हिडाईपश्चात पुन केही तस्वीर क्यामेरामा कैद ग¥यौ र चट्टानसहितका भिमकाय पहाडको मुनिबाट यात्रा अगाडी बढायौं । आधी घण्टाको उकालो ज्यादा ठाडो नभए तापनि सिमसिम पानीको कारण हिलो र चिप्लो बाटोमा हिँड्न यसै पनि कठिनाई भइरहेको थियो । एक घण्टा आधा हिडाईपश्चात पाँचपोखरीको यात्रामा कठिन मानिने लौरीबिनाको उकालोको सुरुआती बिन्दु आईपुग्योे । पक्की घर नभए तापनि पाँचपोखरी मेलालाई लक्षित गरी खुलेका अस्थायी प्रकृतिका छाप्रे पसलले सानो ग्रामीण बजारकै झल्को दियो ।
केहीबेरको हिँडाइपछि लौरीबिनाको उकालोले असलियत देखायो जति माथि उक्लियो कठिनाइ उति बढ्दै गएको अनुभूति हुँदै गयो । सबैको हालत उस्तै–उस्तै भए पनि एक अर्कालाई सान्त्वना दिँदै घस्रिरह्यौं । पाँचपोखरी स्नान गरिसकेर फर्किरहेका यात्रुहरू ओरालोको बेगमा माथि देखिएको डाँडाको टुप्पोतिर औंल्याउंदै ढाडस दिन्थे, ‘उकोलो अब धेरै छैन, विस्तारै हिडिरहनुस, आइपुग्नै लाग्यो ।’ उकालोमा मुटुको धड्कनको तीब्र गति र बेला–बेलामा सास फेर्नै गाह्रो भएको अनुभूति भयो । यस्तोमा केहीबेर लौरोको सहारामा उभिएरै त कहिले बाटोकै ढुंगामा थ्याच्च बस्दै क्षणभरमै उठिहालेर हिँडाइलाई जारी राख्यौं । अन्तिम जस्तो देखिने डाँडा एकपछि अर्को आइरहने रहेछ । बाटो छेवैमा दाहिनेतर्फ जस्तापाताले बनेको खाजा घर देखियो । त्यहाँ दुई जनाले दुईकप चिया पियौं र फेरी उकालो लाग्यौं । १५ मिनेटको उकालो पश्चात लौरीविना आईपुग्यो । जहाँ आफुले टेकेर आएको लौरो बिसाउने नियम छ । हामीले पनि लौरो बिसायौं, जसको अर्थ रहन्छ आफुले टेकेर आएको लौरो बिसाएपछि सम्पुर्ण पाप नष्ट हुन्छ भन्ने पुरातन आस्थालाई हामीले पनि पहिल्यायौं । त्यसैले होला सबैको पापको चाङनै लागेको थियो । लौरीविना आइपुग्दा समुद्र सतहबाट ४२०० मिटरको उचाइ रहेको थियो । क्यामेराको फ्रेममा अझै धेरै फोटो समावेश गर्दै पाँचपोखरी पछ्याउन अगाडि बड्यौ ।
केही बेरको हिँडाई पश्चात ९ बजेको समयमा समुद्र सतहबाट ४२०० मिटरको उचाइमा अग्ला डाडाँहरूको बिचमा पाँचकुण्डको अवस्थिति पाँचपोेखरी आईपुग्यौं । जुन हामीले कल्पना गरे भन्दा ठूलो क्षेत्रफमा पायौं । साह्रै मनमोहक, आँखा नअघाउञ्जेल डिलबाटै हेरिरह्यौं, मन्त्रमुग्ध बनायो–कुण्डको पानीले एक खालको आकर्षक पैदा गराई रह्यो । आजभन्दा अन्दाजी २३३५ बर्ष अगाडि प्रख्यात शिकारी बुम्वा रुवा बाईवा सिकार खेल्दै हाल पाँचपोखरी तिर्थस्थल रहेको स्थानमा पुग्दा अचानक आफ्नो अगाडि धान खेती गरिरहेको देखेपछि यो के अचम्म हो ? यस्तो हिउँपर्ने ठाउँमा पनि खेती गर्ने को होला ? भनि छेउमा जादाँ धान खेती गर्ने मध्येका लोग्ने मानिस (महादेव) ले शिकारी वाईवालाई देख्ने बित्तिकै धानखेती गर्ने सम्पूर्ण खेताला यसै पाँचपोेखरीको हाल मन्दिर रहेको स्थानमा अलप भएका रहेछन् । यस्तो पहिलो पटक देखेका व्यक्ति वाईवालाई उक्त दृश्य देख्दा अचम्म लागेकोले यो पक्कै पनि भगवान् महादेव तथा महादेवका देवगण परिवारले रोपाई गरेको हुनुपर्छ भनि उक्त शिकारी वाईवाले भगवान्को सम्झनामा मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोेची आफ्नो शिकारी कुकुरलाई लगाएको घण्टी फुकाली रोपाई गर्दागर्दै अलप भएको ठाउँमा घण्टी झुण्डाई मन्दिरको स्थापना गरी फर्किएका थिए भन्ने उक्त स्थानमा रहेको शिलालेखबाट प्रष्ट हुन्छ । यसै रोपाई गरेको स्थानमा धानको बाला खोज्नेक्रम हालसम्म पनि चलिआएको छ । यो धानको बाला भेटिएमा धनवान् हुनेछ भन्ने भनाई अहिलेसम्म पनि प्रचलित छ । पाँचवटा पोखरीले घेरिएको यस तिर्थ स्थलमा एक ‘वर’ मागे भगवान्ले पुर्याईदिने किम्बदन्ती अनुसार भाद्र महिनाको एकादशीदेखि जनै पुर्णीमाको दिनसम्म टाढा–टाढाबाट हजारौं संख्यामा भक्तजनहरु आई तिर्थ गर्ने भएकाले यो तिर्थस्थल ज्यादै लोकप्रिय छ ।
यहाँ आइपुगेका तिर्थयात्रीहरू कुण्डमा नुहाउने गर्दछन् । जाडोका समय नभए पनि स्थानको उचाइको हिसावले यहाँ चिसो र जाडो त हुने नै भयो । तथापि, कुण्डमा डुबुल्की मारेर बाहिर निस्कँदाको क्षणको आनन्ददायी अवस्था यहाँ शब्दले वर्णन गर्न सकिँदैन । पाँचपोखरी आइपुग्दासम्मको सबै थकान, भारीपन, मन्द टाउको दुखाई सबै सजिलै मेटिएको अभास भयो । कुण्डको स्नान पश्चात केही फोटो लियौं । फोटो लिएको केही बेरमा वरिपरीको दृश्यलाई कुहिरोले लुकाईदियो । केही बेरको बसाई पश्चात खाना खाएर १६ जना मध्ये ९ जनाको समूहले भोताङ पुग्ने कल्पनाको साथ बाटो ततायौं । जादाँ बखतको उकालोलाई मनन गर्दै भोताङबाट करिव १५ घण्टाको उकालोलाई विटमार्दै ओरालो झर्न तर्फ लाग्यौं । पानीमा रुझ्दै करिब ९ घण्टाको ओरालोपश्चात भोेताङ पुगियो । भोताङबाट मानेखर्क (जहाँ उकालो लाग्दा लेकाली आलुको जिब्रोले स्र्पश गरेको थियो) जानको लागि एउटा ट्रक तयारी अवस्थामा फेला पर्यो र त्यो रात मानेखर्कमा विश्राम गर्यौ । लत्रक्कै गलेको शरिर र थाकेका आखाँले कतिबेला ढोका बन्द गरे पत्तै भएन । भोलीपल्ट सबेरै उठेर आफ्नो नित्यकर्म सकेर मानेखर्क तिपेनी हुदैँ यात्रा तय गरिएको स्थान मेलम्चीमा पुगरे पाँचपोखरी यात्रालाई बिट मायौं ।
प्रचण्डको अर्को पाटो
'ठाउँमा पुग्दा लाछि पनि सुरो हुन्छ'
२०७६ असोज ७ गते १०:५३
छठ पर्वको महिमा र चार दिन
विकासको 'रथ तान्ने' आधारभुत शक्ति युवावर्ग
गर्मी मौसम हृदय रोगीहरूको लागि खतरा
डा. विकास दलि
२०७५ असार १ गते २१:०८
युवालाई मत किन ?
२०७४ मंसिर २० गते ०८:०६
दलाई लामा अर्थात 'द लाइ लामा'
२०७४ मंसिर ११ गते १३:३६
सन्दर्भः गौरा पर्व र 'पर्वको सामाजिक महत्त्व'
२०७४ भदौ १३ गते २०:४८
‘मेरो चुनावी एजेण्डा जित्ने आधार हो’
२०७४ असार १५ गते १०:१९